Red Bull Homerun 2020 İçin Kayıtlar Başladı | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYTurkish Black Sea Coast14 BoluKunyoresa kweRed Bull Homerun 2020 kwatanga
17 / 01 / 2020 14 Bolu, 16 Bursa, 25 Erzurum, 38 Kayseri, Central Anatolia Region, Eastern Anatolia Region, GENERAL, Turkish Black Sea Coast, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY, TELPHER
kunyoreswa kwakatanga kuti tsvuku nzombe Homerun
chikuru mitambo yechando chiitiko kwegore Red Bull Homerun, Turkey ari kugadzirira kutora pamusoro inokosha state nzvimbo.
Unomhanya zvakadii? Unogona kukurumidza sei kukwira? Zvakanaka, imi mungaita mese pamwe chete? Red Bull homers, zvina chando zvemitambo muTurkey anouya mupfungwa ndiyo gomo Palandöken, Uludag, Kartalkaya uye February 8th pa Erciyes kutsvaka mhinduro yemibvunzo iyi.
Iwe unogara wakagadzirira kumhanya uye kutsvedza neRed Bull? MunaFebruary, iwe unokokwa kunakidzwa nemakomo uye kuwana chaiyo Red Bull chiitiko.
Iyo Red Bull Homerun Concept iri nyore: iwe unosiya zvigadzirwa zvako zvekiini kune imwe nzvimbo, iwe unofanirwa kumhanya kubva kune yekutanga mutsara kune iyo nzvimbo uye kupfeka zvigadzirwa zvako nekukurumidza sezvazvinogona. Pashure achazoratidzira hunyanzvi hwake hweku ski kusvikira pamutsetse wapedza. Panopera nhangemutange, chiitiko chakasiyana zvachose chakamirira iwe.
Ruzivo rwakakosha rweRed Bull Homerun
Red Bull Homerun isangano riri pamusoro pemakore gumi nemasere uye rakavhurika kune skiers uye snowboarders emazinga ese.
Vese vatori vechikamu vanofanirwa kupfeka zvinodikanwa zvekudzivirira (ngowani, gogi, magurovhosi). Vatori vechikamu vasina michina iyi haakwanise kutora chikamu mune chiitiko.
Ivo vatori vechikamu ivo pachavo vanoita basa kune chero chiitiko chingaitika kumidziyo. Iyo sangano haigamuchire mutoro wekuratidzira michina.
Red Bull Homerun ine mapoka maviri: skiing uye snowboarding.
MuRed Bull Homerun, mibairo ichapihwa muzvikamu zvina.
Tsvuku Tsvaga Homeron Kunyoresa CLICK HERE
Kuverengera Kunotanga kweRed Bull Flight Zuva
Kunyora kwaFIATA 2014 Istanbul Congress Yakatanga
Kunyoresa kweChando Nhabvu Zvikoro muBursa
Red Bull Inouraya muna Erciyeste
Kufarira kukuru muDombo reBlack Bull Snow muErciyes
10 Zviuru Istanbul Watched Red Bull Car Park Drift World Final
Kunyoresa kweMutambo weDenga Kunoenderera
Kuvharwa Kwezviyeuchidzo Kumutambo Car Project muKütahya
Iyo yemota cable yemuchina yakarongwa kuti ivandudzwe pakati peHistar neH d h l d ah mu K Ktahyaâ € Hisar
Kugamuchirwa kubva kuNational Council of Monuments of Kastamonu
MuKastamonu Teleferic Project, Bhodhi reMusoro rakapa chibvumirano chekupedzisira
Tsvuku nzombe nyowani
Red Bull Homerun Pfungwa